Dhalo Sheekh Xaamud oo booskan loo magacaabay ayaa wax ka dhiga Jaamacadda PSU
GAROOWE, Puntland- Wareegto kasoo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda Waxbarashada Puntland, ayaa xilkii looga qaaday Guddoomiyihii guddoonka waxbarashada gobolka Nugaal, Xaashi Xuseen Faarax oo muddo xilkan soo hayay.
Sida lagu sheegtay Digreetadan oo uu ku saxiixanyahay Wasiirk Abshir aw-Yuusuf Ciise, mas'uulkan ayaa shaqada laga cayriyay sababo ay kamid tahay cabashooyin soo noq-noqday oo hortaagan in hormar laga gaaryo waxbarashada Nugaal.
Sidoo kale madaxda wasaaradda ayaa talo galyo ka dhiibtay arrintan iyadoo Booskaas loo magacaabay, Cabdisamad Sheekh Xaamud (Dhalo), kaasoo kamid ahaa dhalinyarada Cayaaraha gobolka Nugaal muddooyinkii dambena wax ka dhigi jiray Jaamacadda PSU.
Guddoomiyaha cusub, ayaa sidoo kale soo noqday Kabtanka xulka kubadda cagta gobolka Nugaal, isagoo haysta darajada heerka labaad ee waxbarashada Jaamacadda.
Tallaabadan ayaa timid xilli muddooyinkii dambe wasaaradda uu ka jiray is-qabqabsi ku aadan shaqada mas'uuliyiinta sare oo uu ku lug leeyahay Madaxweyne Gaas, kadib markii uu soo saaray Wareegto uu awood ku siinayo wasiir dowlaha wasaaradaas.
Taasi waxay markii dambe keentay in Agaasimihii wasaaraddan loo wareego Cadaaladda islamarkaana Maxamed Cali Faarax oo booskaas joogay loo soo wareejiyo Waxbarashada.
Lama oga magacaabistan cusub waxay ka badali doonto hannaankii waxbarashada gobolka Nugal, xilli labada mas'uul ee la isku badalay aysan wali ka hadlin Digreetada wasiir Abshir.